9-ka Tifatireyaasha Fiidiyow ee ugu Fiican ee Bilaashka ah | Golaha Moobaylka
Ciise Sanches | | Barnaamijyada
La tafatirka fiidiyowga Ma aha dhaqan dambe oo loogu talagalay xirfadlayaasha iyo filim sameeyayaashaMaanta, isticmaale kasta ayaa wax ka beddeli kara fiidiyoow heer sare ah wuxuuna ku daabici karaa shabakadaha bulshada, boggooda ama wixii kale ee adeeg ah. Qoraalka xiga waxaan ku tusi doonaa tifaftireyaasha fiidiyowga ee bilaashka ah iyo tan ugu muhiimsan: sumad la'aan.
Thanks to tifaftireyaasha soo socda ee fiidiyowga ah waxaad awoodi doontaa inaad qabato shaqo heer xirfadeed ah adigoo ka fogaanaya astaamaha biyo-gelinta ee daalka badan ee aan inta badan ka helno barnaamijyada bilaashka ah. Hoos waxaad ka arki doontaa a liiska barnaamijyada tafatirka fiidiyowga ugu fiican iyadoon laga tagin astaamo-biyoodyo iyo bilaash.
1 Tifatirayaasha fiidiyowga ee bilaashka ah ee aan lahayn calaamadeyn
1.1 OpenShot (Windows, MacOS iyo Linux)
1.1.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.2 Toogasho (Windows, MacOS iyo Linux)
1.2.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.3 Tifatiraha Fiidiyowga VSDC ee Bilaashka ah (Windows)
1.3.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.4 Tifatiraha IceCream Video (Windows)
1.4.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.5 VideoProc (Windows iyo MacOS)
1.5.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.6 Tifatiraha VideoPad Video (Windows iyo MacOS)
1.6.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.8 DaVinci Xalli 17 (Windows, MacOS iyo Linux)
1.8.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
1.9 Laydhka (Windows, MacOS, iyo Linux)
1.9.1 Shuruudaha nidaamka ugu yar
Tifatirayaasha fiidiyowga ee bilaashka ah ee aan lahayn calaamadeyn
OpenShot (Windows, MacOS iyo Linux)
OpenShot waa tifaftire weyn oo bilaash ah, oo furan oo fiidiyow ah oo aan lahayn astaamo. Xilligan, waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan kuwaa isticmaalayaasha bilowga ah kuwaas oo u baahan inay wax ka beddelaan fiidiyowyada si fudud oo dhakhso leh oo ay helaan natiijooyinka ugu badan. Ka mid ah fursadaha wax ka beddelka, waxaan iftiimineynaa howlaha soo socda:
Wax ka beddel fiidiyowyada si dhakhso leh oo fudud mahadnaqdeeda is-dhexgalka fudud iyo dareenka leh.
Waxay taageertaa ficil ahaan dhammaan qaababka fiidiyowga iyo maqalka.
Kuu ogolaanayaa inaad kula shaqeysid lakabyo badan iyo raadad
Waxaa ku jira aalado animation sare 3D ama Chroma Key function.
Kuu ogolaanayaa inaad jar, miisaanka, gooyo, iyo cabirrada clips.
Kudar cinwaano sikoobyo ah.
Dhoofinta tooska ah ee shabakadaha bulshada ama YouTube.
4K tafatirka iyo dhoofinta.
Dhoofinta aan watermark.
Ma lahan awoodaha tafatirka kamaradaha badan.
OS: Windows 7 ama ka sareeya, Linux o MacOS
Booska ku yaal HDD: 500MB rakibaadda.
Waxaan ku soo dejisan karnaa OpenShot bilaash adigoo gujinaya halkan.
Shotcut (Windows, MacOS iyo Linux)
Shotcut wuxuu aad ugu eg yahay OpenShot, waa il-bixiye kale oo furan oo fiidiyoow ah ma leh watermarks Waxay taageertaa tiro badan oo fiidiyow iyo qaabab maqal ah. Isticmaalkiisa waxaa loogu talagalay dadka isticmaala bilowga ah oo aan u baahnayn hawlo aad u horumarsan, haddana waxay leedahay hawlo taxane ah oo aad u cajiiba:
Wax ka beddel hal ama wax ka badan oo jadwalka ah.
Kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhinto, miisaan, iyo cabirrada clips.
Codso saamaynta muuqaalka iyo codka, iyo sidoo kale miirayaasha.
OS: Windows 7 ama ka sareeya, MacOS ama Linux.
Processor: 32-bit ama 64-bit badan.
RAM: 4GB RAM (Lagu taliyay: 8GB ama ka badan) -
Booska ku yaal HDD: 100MB rakibaadda.
Waxaan kala soo bixi karnaa Shotcut-ka bilaash adigoo gujinaya halkan.
VSDC Tifaftiraha Fiidiyowga ee Bilaashka ah (Windows)
VSDC waa tifaftire fiidiyoow aan toos ahayn oo fiidiyoow ah oo loogu talagalay shaqsi ahaan iyo adeegsi xirfad ahaanba, waxay dammaanad qaadaysaa natiijooyin aad u wanaagsan iyada oo aan laga tagin astaamaha. Waxay taageertaa mid tiro badan oo qaabab ah oo u oggolaanaysa, iyo waxyaabo kale, in la sameeyo kuwan soo socda:
Ku dar saamaynta muuqaalka iyo codka.
Kuu ogolaanayaa inaad si toos ah u dhoofiyaan video ah ee shabakadaha bulshada iyo YouTube.
Codso miirayaasha iyo saxeyaasha sawirka.
Dheellitir sawirka (dhalaalka, isbarbar dhiga, dhereg, hue…).
Shaqada la shaqaynta maaskarada (maaskaro).
4K iyo HD dhoofinta
OS: Windows XP ama ka weyn
Meel adag oo disk ah: 50 MB rakibaadda
RAM: 256 MB oo RAM ah
Xalka moodada: 1024 × 768 pixels oo leh 16-bit ama ka badan.
Processor: INTEL, AMD ama la mid ah xawaare ugu yaraan 1.5 GHz
Microsoft DirectX 9.0c ama noocyada dambe
Waxaan kala soo bixi karnaa VSDC bilaash adigoo gujinaya halkan.
Tifatiraha Fiidiyaha IceCream (Windows)
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu caansan ee laga helo dadka isticmaala internetka ee caadaystay isticmaalkooda tifaftireyaasha fiidiyowga oo aan lahayn calaamadeyn. Waa tifaftire fiidiyow oo fudud oo bixiya hawlo badan oo noo oggolaan doona inaan abuurno fiidiyow aad u dhammaystiran. Waxaa ka mid ah, waxyaabaha soo socdaa:
Interface editor fudud oo aad u dareen leh
Ku milmaan fiidiyowyada iyo sawirrada waqtiga.
Ku dar macaamil ganacsi.
Dalagyada, gooyaa, rog rogaya oo wareegaya fiidiyowyada.
Ku dar fiidiyowga iyo maqalka.
Ku dar cinwaanada fiidiyowga.
Dardar ama gaabiso fiidiyowyada.
Wuxuu aqbalaa qaabab badan oo fiidiyoow ah.
OS: Windows 7 ama ka sareeya.
Processor: 2.66Ghz Intel®, AMD ama processor kale oo la jaan qaada.
Laga soo bilaabo 100MB illaa 5GB meel disk bilaash ah
DirectX 11 taageerada qalabka
Waxaan kala soo bixi karnaa IceCream Video Editor bilaash adigoo gujinaya halkan.
VideoProc (Windows iyo MacOS)
VideoProc waa mid ka mid ah tifaftirayaasha fiidiyowga bilaashka ah ee bilaashka ah ma leh watermarks. Tani waa aalad tafatirka fiidiyowga ah ee loogu talagalay dadka bilowga ah ee u baahan inay wax ka beddelaan waxyaabaha aasaasiga ah natiijooyin aad u xirfadaysan.
VideoProc waxay taageertaa in kabadan 370 codecs iyo in kabadan 420 qaab beddelid. Waxyaabaha kale, VideoProc waxaad ku sameyn kartaa:
Tafatir fiidiyowyada 4K iyo HD
DVD-yada ka dhig mid aad u ballaaran
Ka jar, isku dar oo iska jar cutubyada.
Kudar saamaynta muuqaalka iyo miirayaasha fiidiyowyadaada.
Ka hawl geli ama ku dar subtitles.
Xasilinta fiidiyowga, hagaajinta kalluumeysiga, sawaxanka ka baxa.
SW: Windows 7 ama ka sareeya
Mac: Mac OS X Snow Leopard ama ka sareeya
Gacaliye: 1 GHz Intel® ama AMD® processor (Uguyar)
RAM: 1GB RAM (Lagu taliyay: 2GB ama ka badan)
Booska Hard Drive-ka: 200MB rakibaadda
GPU-yada la wadaagi karo ama kaarka sawirada NVIDIA® GeForce GT 630 ama ka sareeya, Intel® HD Graphics 2000 ama ka sareeya iyo AMD Taxanaha Radeon HD 7700 (VCE 1.0) ama ka sareeya.
Waxaan kala soo bixi kartaa VideoProc lacag la’aan adigoo gujinaya halkan.
Tifatiraha VideoPad (Windows iyo MacOS)
Waa software kale oo tafatirka fiidiyowga oo bilaash ah oo aan lahayn calaamado marwalba siiya natiijooyin wanaagsan kuwa isticmaala. bilowga ah. Waxay u taagan tahay muuqaalkeeda fudud iyo dareenka, xoogaa duug ah laakiin aad waxtar u leh. Ka mid ah suurtagalnimada wax ka beddelka, waxaan iftiimineynaa waxyaabaha soo socda:
Waxay leedahay in kabadan 50 saameyn muuqaal ah iyo miirayaal.
Ku dar ku-beddelka barnaamijyadaada
Ku dar saamaynta dhawaaqa.
Waxay la shaqeysaa tiro badan oo ah qaabab maqal iyo muuqaal ah.
U samee fiidiyowyo DVD, HD, 3d iyo 360.
Dhoofinta sumad la'aan.
OS: Windows XP ama ka sareeya, OS X 10.10.5 ama wixii ka dambeeya.
Processor: 64-waxbadan Celeron 2.66 GHz ama ka sareeya.
Booska HDD: 50 MB
Xusuusta RAM: 512 MB
Waxaa diyaar u ah Android y iPhone / iPad.
Waxaan kala soo bixi kartaa VideoPad Video Editor si bilaash ah adigoo gujinaya halkan.
Kdenlive (Daaqadaha, Mac OS)
Waa aalad aad u awood badan oo bilaash ah, barnaamij furan oo tafatirka fiidiyowga ah iyada oo aan lahayn astaan-biyood ku sii kordhaya caansaanka. Waxay leedahay dhammaan howlaha aasaasiga ah (bilowga) inaan u baahanno inaan abuurno nuxurka maqalkeenna maqalka ah oo tayo wanaagsan leh. Hawlaha ay qabato, waxaan ku muujineynaa:
Multichannel fiidiyow / maqal maqal ah.
Ku dar guuritaan
Codso saamaynta dhawaaqa iyo muuqaalka iyo miirayaasha.
Taageerada ku dhowaad dhammaan qaabab video iyo maqal ah.
Isdhexgal dareen leh iyo qaab toobiye la heli karo.
U qaabee interface-ka iyo midabbada / mowduucyada.
Kheyraadka internetka ee la heli karo.
Waxaan kala soo bixi kartaa Kdenlive bilaash adigoo gujinaya halkan.
DaVinci Xallil 17 (Windows, MacOS iyo Linux)
DaVinci Resolve 17 waa tifaftire fiidiyow oo aan toos ahayn (nooca ugu sarreeya ee la heli karo) oo aan lahayn calaamadeyn loogu talagalay in loogu isticmaalo xirfad. Tani waxay sabab u tahay tirada badan ee hawlaha tafatirka horumarsan, taas oo ina siinaysa fursado badan oo abuurnimo ah. Waxaan muujin karnaa howlaha soo socda ee DaVinci Resolve (oo ay ku jiraan dhammaan howlaha laga soo bilaabo tifaftireyaasha horay loogu soo sheegay boostada):
Waxa ku jira hawlo badan oo horumarsan oo aynaan ka heli doonin tafatirayaasha kale.
Waxay u oggolaaneysaa isku-darka, tafatirka, duubista iyo hanashada astaamaha maqalka ee leh maqalka maqalka 3D.
Waxaan ka shaqeyn karnaa in ka badan 1.000 kanaal oo kala duwan.
Waan beddeli karnaa midabka qayb kasta oo ka mid ah fiidiyowga (bushimaha naagta, iftiiminta wejiga iyo indhaha wejiga, jilcitaanka maqaarka maqaarka ...).
Kuu ogolaanayaa inaad ka shaqeyso khadka tooska ah si kuwa kale ay kaaga caawin karaan mashruucaaga tafatirka (oo ay ku jiraan sheeko).
Soo-saarid kadib iyo muuqaal aad ufiican oo kaladuwan oo muuqaal iyo dhawaq / shaandheeyeyaal ah.
Isticmaalka Blackmagic RAW (koodh dammaanad qaadaya tayada muuqaalka fiican).
OS: Windows 8.1 ama ka sareeya, OS X 10.10.5 ama ka dib, Linux Xarunta 6.6.
GPU: AMD ama CUDA, 4 GB ama ka badan.
RAM: 8 GB ama ka badan. (16GB ayaa lagu taliyay).
SSD: 512 GB ama ka badan.
Waxaan kala soo bixi karnaa DaVinci Resolve 17 bilaash adigoo gujinaya halkan.
Dhismayaasha (Windows, MacOS iyo Linux)
Lightworks waa tifaftire kale oo fiidiyoow ah oo aan toos ahayn oo loogu talagalay isticmaalka xirfadeed iyada oo aan lahayn calaamado. Waxay leedahay nooc bilaash ah iyo nooc lacag ah oo ay ku jiraan hawlo tafatir oo horumarsan. Waxay u oggolaaneysaa, kuwo kale, tafatirka dhijitaalka ah iyo hanashada fiidiyowga qaababka xallinta sare (2K iyo 4K). Waa kuwan waxyaabaha muhiimka ah ee barnaamijkan:
Interface dareen leh oo si sahlan loo isticmaalo.
Waxay taageertaa tiro badan oo ah qaabab maqal iyo muuqaal ah.
Kuu ogolaanayaa inaad u dhoofiyaan videos for YouTube iyo Vimeo.
Kuu ogolaanayaa dhoofinta HD iyo 4K qaraarada.
Helitaanka waxyaabaha maqalka iyo muuqaalka oo bilaash ah.
Awood u leh inuu ku shaqeeyo jadwallo badan.
OS: Windows vista ama ka sareeya, OS X 10.9 ama ka dib, Linux Ubuntu / Lubuntu / Xubuntu 18.04 iyo wixii ka sareeya.
GPU: AMD ama NVIDIA, 1GB ama ka badan.
RAM: 3 GB ama ka badan.
Laba bandhig oo heer sare ah (1920 x1080) ama ka sareeya.
Waxaan ku soo dejisan karnaa Laydhka bilaashka ah adigoo gujinaya halkan.
Sidaad u aragto, waxaa jira dhowr barnaamij oo lagu tafatiro fiidiyowyada si bilaash ah oo aan laga tagin astaamo-biyood. Halkan waxaan ku tusnay kuwa aan u aragno inay yihiin kuwa ugu habboon waxa aad raadineyso. Inta badan laakiin lamaanaha waxaa loogu talagalay isticmaalka shakhsi ahaaneed iyo kuwa bilowga ah, laakiin dhammaantood waxay bixiyaan natiijooyin wanaagsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » 9-ka tifaftireyaasha fiidiyowga ee bilaashka ah iyo kuwa calaamadeysan
Sida loo Wareejiyo Faylasha Android ee Mac
Ciyaaraha chess-ka ugu fiican kombiyuutarka